Dybala oo Laga tagi karo kulanka Napoli iyo Xiddigo Dhaawac ku Seegi kara Ciyaartaas ? – Gool FM
Dybala oo Laga tagi karo kulanka Napoli iyo Xiddigo Dhaawac ku Seegi kara Ciyaartaas ?
( Seire a ) 19 April 2018. Cayaaryahanada kala Miralem Pjanic, Mario Mandzukic iyo Stefano Sturaro ayuu shaki ku jiraa in ay wajahaan Napoli, laakiin Juventus ayaa ciyaara ka reebi doonta Paulo Dybala kadib bandhigiisa liita.
Juventus waxeey hogaanka ku heysaa Afar dhibcood iyagoo kulan adag axada dambe la ciyaari doona dhigooda Napoli ciyaar fursad u ah iney dhibcaha ku dheerestaan.
Labada xiddiga ee Pjanic iyo Mandzukic ayaa seegay kulankii xalay 1-1 ay la galeen kooxda Crotone sababo dhaawac ah, balse waa kuwo bilaabay tababarka, inkastoo aysan ku jirin qorasha kooxda ee kulanka soo socda.
Laakiin laacibka Sturaro ayaa ciyaaray kulankii garoonka Stadio Scida waxaana loo arkay mid dhaawacan, sidaas dartee lama hubo inuu taam u noqon karo kulanka axada.
Sida ay warineyso majalada Sky Sport Italia, waa suura gal in Max Allegri uu kaga tagi doono keedka Dybala ciyaarta weyn ee xagaaga.
Kadib bandhigii ay sameysay juventus kulankii lugta labaad ee koobka Champions League guusha ka gaareen Real Madrid, Dybala wuxuu ahaa ganaax ciyaartaas,waana mid loo arko in falsafada macalinka ay ka maaranto isaga.
Douglas Costa ayaa qaab cajiib ah soo bandhigay isagoo caawiyay afar gool labadii kulan ee u dambesay, halka Gonzalo Higuain uu yahay mid aan laga tagi doonin kulanka kooxdiisii hore, waxeeyna meesha ka saareysaa in Dybala uu kulanka banaanka ka ahaado.
Cristiano Ronaldo oo Bar Bareeyay Rikoorkiisa ugu fiicnaa ee dhanka goolka Kulamada Real Madrid
Hogaamiyaha Kooxda Roma Di Francesco oo ka Badali kara Shaqada Chelsea Macalin Antonio Conte